Izinyathelo zokuphepha zokufaka izitebhisi zensimbi engagqwali - China Foshan Hermes Steel
Izitebhisi zensimbi engagqwali zithandwa ngaphakathi nangaphandle, futhi futhi ingesinye sezitebhisi ezijwayeleke kakhulu. Yini okufanele siyinake lapho sifaka izitebhisi zensimbi engagqwali?
1. Izinyathelo zokuqapha ukufakwa kwezigxobo zezitebhisi zensimbi engagqwali
1. Ukufakwa kwezitimela kufanele kwenziwe ngokuya ngezidingo kanye nokuhleleka kukayinki wokwakha kuya phezulu kusuka ekuqaleni.
2. Izingongolo ezinhlangothini zombili zepulatifomu ekuqaleni kwezitebhisi kufanele zifakwe kuqala, futhi ukufakwa kufanele kuboshwe.
3. Ngesikhathi sokwakhiwa kwe-welding, induku ye-welding kufanele yenziwe ngezinto ezifanayo nezinto eziyisisekelo. Ngesikhathi sokufakwa, isigxobo nengxenye eshumekiwe kufanele ilungiswe okwesikhashana ngokushiswa kwendawo. Ngemuva kokuphakama nokulungiswa okuqondile, i-welding kufanele iqine.
4. Lapho amabhawodi esetshenziselwa ukuxhuma, izimbobo kupuleti lensimbi ezansi kwesigxobo kufanele zicutshungulwe zibe izimbobo eziyindilinga ukuvimbela amabhawodi wokunweba angahambisani nezikhundla zawo. Ukulungiswa okuncane kungenziwa ngesikhathi sokufakwa. Ngesikhathi sokwakha, sebenzisa i-drill kagesi ukubhoboza amabhawodi wokunweba ngaphansi kwesigxobo sokufaka, xhuma isigxobo bese usilungisa kancane. Uma kunephutha ekuphakameni kokufakwa, lungisa nge-gasket yensimbi ezacile. Ngemuva kokulungiswa okuqondile nokuphakama, qinisa izikulufu. ikepisi.
5. Ngemuva kokufaka izingongolo emaphethelweni womabili, sebenzisa indlela efanayo ukufaka izingongolo ezisele ngokudonsa intambo.
6. Ukufakwa kwesigxobo kufanele kuqine kungabi okuxekethile.
7. Izingxenye zokuxhuma nezinsimbi zokuxhuma kufanele ziphathwe nge-anti-corrosion kanye ne-anti-rust ngemuva kokufakwa.
Okwesibili, inqubo yokufaka insimbi engagqwali izitebhisi handrails
1. Ukufakwa kwama-handrails ensimbi angenasici
Ukufakwa kwezingxenye ezifakiwe Le ndlela ukusebenzisa amabhawodi wokunweba namapuleti ensimbi ukwenza izixhumi ezifakwe ngemuva. Okokuqala beka umugqa esisekelweni sokwakhiwa komphakathi bese unquma ikholomu Lungisa ukuma kwephoyinti, bese ubhola imbobo phansi ezitebhisini nge-drill yomthelela, bese ufaka amabhawodi wokunweba. Amabhawodi agcina ubude obanele. Ngemuva kokuthi amabhawodi abekwe kahle, qinisa amabhawodi bese ushisela inathi kanye nesikulufa ukuvikela inathi kanye nensimbi yensimbi ukuthi ingakhululeki. Ukuxhumana phakathi kwe-handrail nendawo yodonga nakho kwamukela indlela engenhla.
Ukuhlelwa kabusha ngenxa yokwakhiwa okushumekwe ngenhla okungenhla kungadala amaphutha. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba kufakwe ikholomu, kufanele kulayishwe umugqa futhi ukuze kunqunywe ukunemba kwesimo sepuleti elingcwatshwe kanye nesigxobo esiqondile esishiselwe. Uma kukhona ukuphambuka, kufanele kulungiswe ngesikhathi. Kufanele kuqinisekiswe ukuthi zonke izinsika zensimbi engagqwali zihleli emapuletini ensimbi futhi zingashiselwa nxazonke.
3. I-armrest ixhunywe kukholamu
Ngaphambi kokufakwa kwe-handrail nekholomu yokuxhuma ikholomu, umugqa ubekwa ngentambo evulekile, futhi nomsele wenziwe ngomshini ekugcineni okungenhla ngokuya nge-angle yokuthambekela kwezitebhisi nokujikeleza kwe-handrail esetshenzisiwe. Bese ufaka i-handrail ngqo emgodini wekholomu, bese uyifaka ngokushisela indawo kusuka kolunye uhlangothi kuya kolunye. Ama-handrails aseduze afakwe ngokunembile futhi amalunga aqinile. Ngemuva kokuthi amapayipi wensimbi asondelene nawo efinyelwe, amalunga afakwa ama-electrode ensimbi angenasici. Ngaphambi kokushisela, amabala kawoyela, ama-burrs, izindawo zokugqwala, njll. Phakathi kobubanzi obungu-30-50mm ohlangothini ngalunye lwe-weld kufanele kususwe.
Ezintathu, ukugaya nokupholisha
Ngemuva kokuthi uprights and handrails konke kufakwe ama-welding, sebenzisa umshini wokugaya wesondo ophathekayo ukuhambisa ama-welds kuze kube yilapho izinsimbi zingabonakali. Lapho upholisha, sebenzisa isondo lokugaya i-flannel noma uzizwe upholisha, bese usebenzisa okunamathiselwe kokucwebezelisa okuhambelana ngasikhathi sinye, kuze kube yilapho kufana ncamashi nezinto ezakhelene nazo, futhi umthungo we-welding awusobala.
4. Ngemuva kokuthi kufakwe indololwane, izinhlangothi zombili ze-armrest eqondile neziphetho zombili zenduku zimile okwesikhashana ngokufakwa kwe-welding.
Isikhathi Iposi: Sep-02-2021